HALYAY KU DAYASHO MUDAN BAA U KACAY SOMALIDA ETHIOPIA - Cakaara News
HALYAY KU DAYASHO MUDAN BAA U KACAY SOMALIDA ETHIOPIA
(CakaaraRa'yiga) Arbaco Sept 11,2013.Sooyaalka Noloshu ama Meertada Nololeed wuxuu sheegayaa in umad-walba mustaqbalkeedu ku xidhan yahay nooca hoogamiyaha ay talada u dhiibato ama hogaanka u qabta, Nasiibkuna waxaa uu umadaha aduunka ku kala kaxeeyaa hadba nooca hogaamiye ee umadi hesho sida maanta ka muuqata Deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Ummadi hadey weydo Hogaamiye il-dheer, horusocod ah, aragti fog, Dacad ah, cadaali ah oo Sidoo kalena u dhashay karti, aqoon, adkeysi,hal-abuur leh iyo in uu ka caaganyahay musuqmasuq,Qabyaalad,danaysi si uu u rumeeyo ka jawaabista RAJADA SHACABKA, umadaasi waxay noqotaa ummad dib u dhacda oo ka hadha tartanka aduunku ugu jiro nolosha guusheeda tusaalena loo soo qaadan karo xukuumadahii ka horeeyay ta manta ka jirta kililka .
Sidaas darteed waxaan qormadan u qoray ka dib markii aan la dhacay horumarka madaxweynaha Somalida Ethiopia Mudane Abdi Mahoud Omar, uu gaadhsiyay ummadiisa Somalida Ethiopia taas oo xitaa cashar ugu filan dhamaan Somalida ku hungowdey in ay mar uun helaan hogaamiyaha ay u qalmaan ee rumeyn kara ka jawaabista Rajadooda.
Intii aanu Madaxweyne ka noqon kililka-shanaad ee Somalida Ethiopia mudane Abdi Mahamoud Omar, waxay tariikhdu ka marag kacaysaa in kililka Somalida Ethiopia ahaa kilil dib u dhacay oo aad uga danbeeya shucubaha iyo kililada kale ee Ethiopia, waxaanu kililku ku suntanaa meel uu musuqmasuq daashadey oo ay adkayd in la soo gaadhsiiyo kililada kale ee Ethiopia, sidoo kale Casimada kililkuna waa jigjigee, waxay ahayd mid aan la tartami Karin casimadaha kililada kale ee dalweynaha Ethiopia.
Madaxweynahan la mahadshay intii uu xilka hayay oo ah waxaan ka badnayn 3 sano waxa uu ku talaabsadey talaabooyin iyo isbedelo-horumar,n/galyo iyo maamul-suuban oo wax ku ool ah tusaalena uga soo qadan karno qaar ka mid ah guulaha aan la tirin Karin oo anigu maanta aan ka soo qaatey dhawr uun inta bog ii qadi karo!
Madaxweyne Abdi Mahamoud Omar, wuxuu dib u dhis balaadhan ku sameeyay casimada kililka Somalida Ethiopia, adiga’oo marka aad maanta tagto Jigjiga indhahaga ku arkaya horumarka baxada leh ee ka muuqda ama ka socda Jigjiga sida wadooyinka, laydhka wadooyinka la raacshey, dhimayaasha casriga,dhigida dhagaxa la qoray(Cobble-stone),Mashaariicaha Dhismayaasha Fooqyada dhaadheer ee teedsan wadooyinka wajahadaha iyo dhiraynta wadooyinka.
Hadaad eegto dhinaca wadaniyada oo ah mida ugu muhiimsan Abdi Mahamoud Omar, waxaa u ku guulaystey in Somalida Ethiopia u dhacsiiyo in ay yihiin qoomiyad ka mid ah qoomiyadaha Ethiopia, halkii ay uga soo hanqal tagi lahayeen Somaliyada kuftey ee dib u soo kici kari weydey. Isaga oo hurumariyay wadaniyada iyo dhaqanka taas oo keentey in markii ugu horaysay ay Somalida Ethopia ay u hesaan calankooda Somalida Ethiopia iyo ka ay la wadagaan Ethiopia oo dhan Munaasbad heer-qaran ah oo DDSI loogu sameeyay Sheraton Hotel looguna magacdaray taariikhda iyo dhaqanka soomaalida itoobiya.
sidoo kalena a Madaxweynaha DDSI uu xooga saaray soo noolaynta dhaantadii kililka caanka ahayd iyo sameynta ESTV oo calamiya oo soo gudbinayaa waxkastoo ku saabsan horumarka dhulka iyo ismaamulka Somalida Ethiopia maalin kasta ka socda. Madaxweyne Abdi Mahamoud Omar, waa madax weyne kartiidiisu u samaxdey in uu safar dhulka ah ku tago dhamaan gobolada iyo dagmooyinka dhul-weynaha Somalida Ethiopia la shacabkiisa lana soo wadaaga nolosha shacabkiisa,sidoo kalana 5ta qaaradood ee aduunka.
Socdalada Madaxweynaha DDSI ayaa ay ugu danbeeyeen labadii socdaal ee isku xigay kii loo baxshay Sama-Wade ee Harshin ilaa Qoraxey ahaa iyo Nolol iyo Rajo-rumays, Talabadan oo ahayd mid uu madaxweynuhu dhinaca fiican u qaday madama oo ay dadka halkaas dagaa ay wax badan tabanayeen waxay ahayd guul in madaxweynuhu dadkaas u tago oo u geed hoostiis la fadhiisto si u’maqlo tabashooyinkooda wana astaan naadir ku ah hogaamiyayaasha African gaar ahaan Hogaamiye sinjiga Somali ka ah.
Waa madax weyne da’ yar oo dhamaan Golahiisa xukumada ay ka mid yihiin dhalinyaro aqoon yahan ah, taas oo daliil u ah in uu rabo in helo koox xoogan(Ciidan Horumarineed) oo adkeysi u leh jidka dheer ee loo marayo rumaynta rajada shacabka. Waana astaan mujinaysa in ay madaxweynaha ay ka go’antahay in uu wax qabto una keeno bulshadiisa isbedel la taaban karo. Waa Madaxweynihii ugu horeyay ee soo bandhiga in uu wax ka qabanayo halka ugu daran shacabka xoolo dhaqatada ah ee Somalida Ethiopia, isagoo ku nadray mudnaana uga dhigay xukumadiisa in ay wax ka qabtaan biyo-yaraanta iyadoo qorshuhu yahay in la soo saaro biyo Nadiifa wixii dhulka ku jira, in la keydiyo bar kasta oo biyo ah oo cirka ka soo dhacda iyo in laga fa’iideysto biyaha socda ee wabiga Juba ilaa heer u reer guraagii u ka dhigay xoolo dhaqato beeraleey! Madaxweynahan dada yare e u kacay Somalida Ethiopia wuxuu hayaa wado u samaxaysa in kililka somalida Ethopia ka muuqdo dhamaan kililada kale ee dalweynaha Ethiopia.lana tartamo aduunka intiisa kale.
Ugu danbayn qalinkeyga waxaan fariin ugu diri lahaa Madaxweyne Abdi Mahmoud Omar, anigoo leh…. Madaxweyne ha nasan oo sii wad dadaalka horusocodka ah ilaa aad aragto dhamaan ummada aad madaxweynaha u tahay oo ugu yaraan tuulo kasta ay yeelato school, helaan biyo nadiif ah, Cafimaad, Koronto, isgaadhsiin, wadooyin u samaxa in ay ku xidhamaan suuqyada waaweyn ee Ethiopia iyo in aad kor u qaado dakhliga soo gala qofka iyo meertada maaraynta nolosha qoys-kasta.
Madaxweyne raad-raac tabihii iyo guulihii ay soo hoyeen hogamiyaashii tariikhda galay ee Lee Kuan ee Singapore, sheikh Mohamed bin Rashid Al-Maktoumka Dubai ee wali nool iyo Abihii Ethiopia cusub ee Meles Zenawi ee dhawaan geeriyooday!!
Abdikarimm Ahmed Mooge